Hurricane Lorenzo: hunhu, mavambo uye shanduko yemamiriro ekunze | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 05/04/2021 10:57 | Madutu
El Dutu Lorenzo yakaitika munaGunyana 2019 uye yaive pa45 degrees kumadokero kureba. Yakasvika pakukanganisa madokero ekumadokero kweEurope munzira yaiperera kuchamhembe kwekuchamhembe kweBritish Isles. Yakanga iri dutu rinotyisa kwazvo kuona kuti ndicho chimwe chezviitiko zvekutanga munzvimbo ino yepasi. Ndiyo dutu rine simba kwazvo kuoneka padhuze neSpain kwenguva yakareba sekunge tine zvinyorwa.
Neichi chikonzero, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kupfupisa zvese hunhu hweDutu Lorenzo uye kana tichizozviona zvakare, izvi zvichaitika mune ramangwana.
1 Shanduko yemamiriro ekunze uye dutu
2 Hurricane Lorenzo Hunhu
3 Dutu Lorenzo munzvimbo yeSpain
4 Zvichaitika futi here?
Shanduko yemamiriro ekunze uye dutu
Tinoziva kuti mhedzisiro yekushanduka kwemamiriro ekunze kuwedzera kwehuwandu uye kusimba kwezviitiko zvemamiriro ekunze zvakanyanya senge kusanaya kwemvura nemafashama. Mune ino kesi, izvo zvinonyanya kukanganisa kugadzirwa kwemadutu zvine chekuita nazvo kukwira kwetembiricha yepasi rose. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti masimba ekuumbwa kwedutu ane chekuita neuwandu hwemvura hunobuda mumhepo uye musiyano uripo pakati pemvura yemakungwa akasiyana. Izvi zvinoreva kuti munzvimbo dzinowanda mvura zhinji, mvura zhinji inopedzisira yaguma sezvo mvura yese iyi ichizoguma ichidonha nekuumba makore emvura anonaya.
Nekuwedzera kwetembiricha yepasirese yepasi rose, tichava neshanduko mune simba remuchadenga. Nzvimbo dzaive dzakatonhora kare, dzinenge dzichipisa uye, nekudaro, tichava nehurefu hwekupfungaira. Hurricane Lorenzo yakananga kuEurope uye, payakafamba kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva, yakaunganidza simba rekuti ive dutu reChikamu 5. Iri iboka repamusoro soro pachiyero cheSaffir-Simpson. Yakafananidzwa nedutu rinoparadza Katrina rakapfuura neNew Orleans muna 2005..
Hurricane Lorenzo Hunhu
Haisi kungo fananidzwa neDutu guru Katrina maererano nehukuru, asiwo munzvimbo yairovera. Ichi chakanyanya kuitika munzvimbo ino yeAtlantic ndiyo nguva yekutanga kunyorwa. Zvinoenderana nezviyero zvese zvemasangano uye nyanzvi, nzira yeHurricane Lorenzo yakaita kuti kondinendi ireruke, uye dambudziko hombe raive muAzores. Akasvika munzvimbo iyi se mhepo dze160 km / h uye mhepo inopfuura mazana maviri, mune dzimwe pfungwa. Panguva iyo yakasvika kuBritish Isles yakanga yatopera simba zvekuti haina kunzi idutu.
Kana chamupupuri chikagadzirwa mugungwa, chinodyisa pamusoro pemvura iyo inopwa uye inosvika pakakwirira painosvika kumahombekombe. Nekudaro, kana yangopinda mukondinendi, inoshaya simba uye inopera simba painopinda. Izvi zvinoita madutu anotyiwa munzvimbo dzemahombekombe kupfuura munzvimbo dziri mukati. Iyo inowedzera mukati menzvimbo nzvimbo ndeye, kunyanya painoponeswa kubva kumadutu.
Dutu Lorenzo munzvimbo yeSpain
Kashoma kwazvo kuona chamupupuri munzvimbo yakafanana neyedu. Mhinduro yekutanga yakapihwa kune iyi mhando yekusahadzika iri pachena. Chinhu chinonyanya kushamisa ndiyo trajectory uye chikamu cheiyi dutu, asi madutu anotanga kuumbwa kwavo mu Africa. Pano ndipo panogadzirwa masaisai ekukanganisa anokonzera kusagadzikana uye anodhonzwa. Kana kudzikama uku kwasvika pagungwa rinodziya kwazvo muCaribbean, dzinova dutu remhando yepamusoro uye rine simba ratinowanzoona.
Chinhu icho nguva ino hachisati chasvika kuCaribbean kubvira yakasangana nemvura inodziya zvakakwana kuti igadzire dutu. Panzvimbo pekuenda kumadokero yaenda kumabvazuva. Sezvatakambotaura, kuti dutu riumbike, zvinongotora mvura yemhando yepamusoro inoita kuti huwandu hwemvura yakawanda huwedzere iyo, pakupedzisira, inobhadharwa kumusoro. Aya ndiwo masikiro anoita mhepo yedutu.
Iyo yaingofanirwa kuenda yakanangana nemadhigirii makumi mashanu ekumadokero kureba kweDutu Lorenzo kuti igadzire. Ichokwadi kuti seyakajairika trajectory yezvatajaira, asi nepo kuenda kuchamhembe, chikamu 5 chakatorwa. Chinhu chinonyanya kufadza nezvechiitiko ichi ndechekuti yakaenda munzira isina kujairika uye, kunyangwe yakapfuura nemumvura inodziya zvishoma, yakakwanisa kutora simba rakaringana kusvika padanho repamusoro remadutu.
Izvi ndizvo zvikonzero nei Hurricane Lorenzo yakave imwe yemadutu akakurumbira enguva yedu. Kana zviri zvekuzvarwa kwedutu, tinoona kuti zvine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze, sezvatakambotaura. Ichokwadi kuti yafanirwa kuwana inodziya mvura kupfuura zvakajairwa kuti isvike muchikamu che5, asi Chero zvazvingaitika, kuvapo kwerudzi urwu rwechamupupuri hakugone kuenderana zvakananga nekushanduka kwemamiriro ekunze. Tinoda zvidzidzo zvekupiwa uye zvimwe zvakafanana nyaya kuti tikwanise kuona chimwe chinhu chakadai. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti shanduko yemamiriro ekunze iri kuve nemhedzisiro yenguva refu uye kuti hapachina humbowo hwakakwana hwekugona kubatanidza zvinokonzereswa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekuumbwa kweHurricane Lorenzo.
Zvichaitika futi here?
Iko kusahadzika kwevanhu vazhinji kuri kana tichizoona dutu rechikamu ichi munzvimbo medu zvakare. Meteorology muSpain inotsanangura kuti neshanduko yemamiriro ekunze tinofanirwa kuve nezvidzidzo zvakasiyana uye zvimwe zvakafanana zviitiko kuti tizive kana paine chero mhando yemhando kana paine shanduko mukuita kwemadutu. Kuda kuziva kunotaurwa muzvidzidzo uye ndiko kuti, tinofanirwa kuona kana madutu akafanana akasvika mumakore anouya kuti tikwanise kutaura nezve iyi pateni. Gore ratakatangira Leslie uyo aive nehunhu hwakafanana naLorenzo. Nezvo, iyo kusava nechokwadi pamusoro pekukanganisa kweshanduko yemamiriro ekunze pamaitiro echimvuramabwe.
Hurricane Leslie yakabata nyika yedu uye yaive dutu rine simba kwazvo kusvika kuIberian Peninsula kubva muna 1842. Yakaonekwawo seimwe yedutu reAtlantic rakareba kwazvo munguva. Yaivewo nehunhu hwakanyanya kusanzwisisika sezvo iine shanduko inoenderera munzira yayo. Izvi zvakakonzera kuti nyanzvi dzikwanise kuronga kosi zvakanaka.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve Hurricane Lorenzo nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Madutu » Dutu Lorenzo